Taratra sasantsasany, amin'ny maha mpitsabo kabary, an'ilay boky "Ny teny rehetra fantatro" nataon'i Andrea Vianello - Cognitive Training
Ianao izao: Home » Articles » aphasia » Taratra sasantsasany, amin'ny maha mpitsabo kabary, an'ilay boky "Ny teny rehetra fantatro" nataon'i Andrea Vianello
Andrea Vianello dia mpanao gazety sady mpanolotra amin'ny fahitalavitra. Mandeha ara-dalàna ny fiainany mandra-pahatongan'ny maraina iray dia rovitra ny carotid-ny, misoroka ny ra tsy hahatratra ny atidoha. Taorian'ny fidirana an-tsehatra tena marefo dia nahita ny tenany i Vianello aphasic: very fiteny. Ny boky Teny rehetra fantatro mitantara ny diany, nanomboka ny marainan'ny hetsika ka hatramin'ny fodiany, nandalo ny fijanonan'ny hopitaly ka nahasitrana azy tao Santa Lucia.
Ireo izay miasa eo amin'ny sehatry ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsaboana amin'ny kabary, rehefa afaka fotoana fohy dia miditra amin'ny "normaly niova" izay misy ny marary manana fiteny, mamaky na manoratra fahasarotana maneho, raha ny marina, ny ara-dalàna fa tsy ny ankanavaka. Ity boky ity kosa etsy andaniny milaza ny aphasia hita avy ao anatiny. Tsy toy ny toe-javatra hafa toy ny fivontosan'ny atidoha na ny dementias, ischemia dia hetsika maina, izay vetivety dia manodikodina ny fiainan'ny olona iray: hitantsika izy, ohatra, ao amin'ilay andalan-teny nijeren'i Vianello ireo hafatra tamin'ny finday voaray ny andro teo nefa tsy nahavaly azy.
Lafiny iray hafa handinihana, raha ny fijerin'ny mpitsabo azy dia ny hoe, amin'ny "fiainana andavanandro voaova" efa noresahina, dia raisinay ho andian-dahatsoratra sy voambolana manokana (apraxia, tsirambina, paraphasia) izay mifanohitra amin'izany izy ireo dia maneho ny tany tsy fantatra ho an'ny marary. Na ireo izay, toa ny mpanao gazety aza, efa nifampiresaka tamin'ny fiteny nandritra ny androm-piainany ary miaina ara-bakiteny amin'ny teny, dia mety tsy sendra azy mihitsy amin'ny ambaratonga miasa amin'ny fiteny, amin'ny rafitra kognitika amin'ny articulation, ny famakiana sy ny fanoratana: ny hatsaran'ny teny an-tsoratra sy am-bava, raha ny marina, dia ny fahatsorany amin'ny fampiharana ary, mandra-pitrangany tranga toy ny ischemia dia raisinay ho toy ny rivotra. Fa ilaina izany makà fotoana foana ary hazavao: ny marary jamba, manaraka ny torolàlana momba ny mpitsabo ihany, dia ho sarotra be ny mahatakatra ny dikan'ny hetsika rehetra atolotra, ary tsy ho afaka hahita tetika tsy miankina izy. Araka ny nolazain'i Seneca dia tsy misy rivotra mety ho an'ilay tantsambo izay tsy mahalala izay halehany.
Ary farany, ny andalana izay niandrasan'i Vianello fatratra ilay mpitsabo miteny dia tena nampihetsi-po ahy, hatramin'ny nanombohany nitady azy nanodidina an'i Santa Lucia taorian'ny minitra vitsy taorian'ny nanombohan'ny fotoanany. Tsy tokony hadinontsika mihitsy hoe ohatrinona ny marary, indrindra ireo izay miasa taona, apetraho ny fanantenan'izy ireo teny Therapy hanomboka hifandray sy hiasa indray, antenaina toy ny taloha. Amin'izy ireo dia ilaina ny manokana ny 100% ny fahaizantsika, ny saintsika ary ny ezaka ataontsika, na dia eo aza ny zava-misy fa ny ain'ny mpitsabo dia toy ny an'ny olon-drehetra, amin'ny olan'ny tena manokana ary indrindra amin'ny andro be atao.
Aphasia dia tsy vitan'ny hoe mampihetsi-po fotsiny fa koa fandaniana ara-toekarena ho an'ny marary sy ny fianakaviany. Ny olona sasany, noho ny antony ara-toekarena, dia mametra ny fahafaha-manamboatra azy ireo, na eo aza ny porofo manohana ny filàna asa mafy sy maharitra. Noho io antony io, nanomboka ny volana septambra 2020, dia azo ampiasaina maimaim-poana amin'ny Internet ny fampiharana antsika rehetra. Azo atao ny mampiasa ny apps web na dia ivelan'ny Internet amin'ny PC-nao aza misintona aphasia KIT. Ity fanangonana ity dia misy fampiharana-tranonkala 5 (Soraty ny teny, ny fahazoana leksika, ny fanonona ny vaninteny, ny fanekena ny vaninteny ary ny latabatra ny vanin-teny) hampiasaina amin'ny solosaina PC sy ny pejy misy karatra mihoatra ny arivo miaraka amina hetsika hanaovana pirinty, latabatra fifandraisana ary fitaovana samihafa.
aphasia, tapaka lalan-dra, ischemia, fiteny, teny rehetra fantatro, Parole, fanarenana fitsaboana amin'ny kabary, vianello
Taratra sasantsasany, amin'ny maha mpitsabo kabary, an'ilay boky "Ny teny rehetra fantatro" nataon'i Andrea Vianello2020-09-242020-10-26http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-23_22-49-20.jpg200px200px